Gabadh Muslimad Ah Oo Sheegtay In Shaqo La Siiyay Markii Ay Xijaabka Dhigtay | Hangool News
Hangool-News(Hargeysa)_Saddex qof oo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badanyahay ee Britain ayaa BBC-da u sheegay in ay aaminsanyihiin kala soocda xagga isirka uu saamayn xoog ku yeeshay noloshooda.
Madaxweyne Santos oo booqanaya Britain
“Waxaan imtixaan u galay illaa 6 shaqo , mana ku guuleysanin, waxaan ogaaday in dadka siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyada oo lagu salaynayo magaca qofka, diintiisa , isirkiisa iyo waliba dharka uu xiranyahay” ayay tiri Shazia.
“Waxaan u xilsaarnaa dhaqangalinta siyaasadaha cusub, oo ay ka mid tahay in aan dajiyo miisaaniyadda, balse markii dambe waxa ay agaasime u magacaabeen qof kale shaqadii aan aniga markii horeba qabanayay” ayuu yiri.
“Shaqada waxa ay u qaateen gabadh caddaan ah oo aad iiga darajo hoosaysa, taas oo xitaa aanan aaggeena ka shaqayn jirin, islamarkaasna aanan aqoonin sida wax u shaqeeyaan” ayuu intaas ku daray.
Lahaanshaha sawirkaRAJESH KUMAR TEWARI
Image captionRajesh ayaa ka mid ah dadka takoorka dareemaya
“Waxaan doonayay in aan shaqo u raadsado Booliiska, nabad sugidda iyo gurmadka, balse ninkii la taliyaha waxa uu igu yiri caqli isu yeel, ma heleysid” ayuu yiri Rajesh oo intaas ku daray in intuba uu shaqo ka waayay.
“Ninkii la taliyaha ahaa ee aan la kulmay waxa uu iisoo jeediyay in aan shaqo ka raadsado dhanka adeegga macaamiisha” ayuu yiri Rajesh.